Xuska 21-ka Janaayo oo diyaar garow loogu jiro – Radio Muqdisho
Xuska 21-ka Janaayo oo diyaar garow loogu jiro
Doodan ayaa ujeedkeedu ahaa u diyaar garowga 43guurada ka soo wareegatay maalintii la dhaqan geliyey Qoridda Afka soomaaliga.
Gudoomiyaha Akadeemiyada Cilmiga Fanka iyo Sugaanta Dr Cismaan Yuusuf Maxamed ayaa sheegay in Akadeemiyadu ay tahayP halka uu ka bilowday Afka Soomaaliga.
Guddoomiye ku xigeenka Gudiga Qaban qaabada Munaasabadan 21-janaayo Cabdi Xaaji Goobdoon ayaa ka hadlay wadadii loo maray inuu baaho afka soomaaliga.
Bare sare Maxamed Siciid Cabdi oo ka tirsan MacallimiintaJus ayaa ka sheekeeyey sida qofka soomaaliga uu uga fogaano Afkiisa hooyo.
Maxamed Cilmi Tooxow Agaasimada Waaxda Dugsiyada Dawladda Xubina ka ah Qabanqaabada ayaa soo bandhigay sida ay ku bilaabantay Farta Soomaaliga.
Qoraa Sare C/qaadir Xuseen Nuur (Maax) ayaa ka hadlay sida uu hodanka uu u yahay Afka Soomaaliya iyo sida ay u arkeynin Dadkiisa.
Intii ay socotay dooda ayaa gudigu ay soo jideen in Hal ku dhigga Sanadka uu noqdo meeris ka mid ah Gabay uu hal abuuray Marxuum Cali Sugule Cigaal oo ahayt OGOLI OO WAXRASHADU WAY EGTEHEE AF SHISHEEYE AYEYNU ADOON U NAHAY.
Ciidamada Xoogga Dalka Ee Ka Howlgala Cadaado Oo La Siiyay Mushaaraadkooda “SAWIRRO”
Wasiirka Gaashaandhigga oo ka hadlay Weerarkii Ceel-Cadde